Induction Heat Ukwelapha Inqubo Engaphezulu - kuyini ukwelashwa kokushisa kokungeniswa?
Iyini inqubo yokwelapha ukushisa kokungeniswa?
Ukushisa ukushisa inqubo yokwelapha ukushisa evumela ukushisa okubhekiswe kakhulu kwezinsimbi ngokungeniswa kwe-electromagnetic. Le nqubo incike emisakazweni kagesi eyenziwe ngaphakathi kokuqukethwe ukukhiqiza ukushisa futhi iyindlela ekhethwayo esetshenziselwa ukubopha, ukuqina noma ukuthambisa izinsimbi noma ezinye izinto zokuhambisa. Ezinqubeni zanamuhla zokukhiqiza, le ndlela yokwelashwa kokushisa inikeza inhlanganisela ezuzisayo yejubane, ukungaguquguquki nokulawula. Yize imigomo eyisisekelo yaziwa kahle, intuthuko yanamuhla kubuchwepheshe obuqinile yenze inqubo yalula ngokumangazayo, engabizi kakhulu indlela yokushisa yezicelo ezibandakanya ukujoyina, ukwelapha, ukufudumeza kanye nokuhlola izinto.
Ukwelashwa kokushisa kokungeniswa, ngokusebenzisa ikhoyili evuthayo kagesi, kuyokuvumela ukuthi ukhethe izici ezihle kakhulu zomzimba hhayi kuphela ingxenye yensimbi kuphela - kodwa engxenyeni ngayinye kuleyo ngxenye yensimbi. Ukuqiniswa kwe-induction kunganikeza ukuqina okuphezulu kokuthwala amajenali kanye nezingxenye ze-shaft ngaphandle kokudela i-ductility edingekayo ukuphatha imithwalo eshaqisayo nokudlidliza. Ungaqinisa izindawo zokuthwala zangaphakathi nezihlalo zama-valve ezingxenyeni eziyinkimbinkimbi ngaphandle kokudala izinkinga zokuhlanekezela. Lokhu kusho ukuthi uyakwazi ukwenza lukhuni noma unamathisele izindawo ezithile zokuqina nokuqina ngezindlela ezizosiza kangcono izidingo zakho.
Izinzuzo Zezinsizakalo Zokuphatha Ukushisa Okungenayo
Ukuphathwa Kokushisa Okugxile Ukuqina kwaphezulu kugcina i-ductility yangempela yomongo ngenkathi iqina indawo yokugqoka ephezulu yale ngxenye. Indawo eqinisiwe ilawulwa ngokunembile maqondana nokujula kwamacala, ububanzi, indawo nobulukhuni.
Kwenzelwe amandla Susa ukungahambisani nezinkinga zekhwalithi ezihambisana nelangabi elivulekile, ukushisa ithoshi nezinye izindlela. Lapho uhlelo selulinganiswe kahle futhi lasethwa, akukho msebenzi wokuqagela noma owehlukile; iphethini yokushisa iyaphindeka futhi iyafana. Ngezinhlelo zombuso eziqinile zanamuhla, ukulawulwa okuqondile kokushisa kunikeza imiphumela efanayo.
Ukukhiqiza Okuphezulu Amanani okukhiqiza angakhuliswa ngoba ukushisa kuthuthukiswa ngqo futhi ngaso leso sikhathi (> 2000º F. ngomzuzwana ongu- <1) ngaphakathi kwengxenye. Ukuqalisa kucishe kwenzeke; akudingeki umjikelezo wokufudumala noma opholile.
Ikhwalithi Yomkhiqizo Ethuthukisiwe Izingxenye azikaze zixhumane ngqo nelangabi noma enye into yokushisa; ukushisa kubangelwa ngaphakathi kwengxenye uqobo ngokushintsha amandla kagesi. Ngenxa yalokho, i-warpage yomkhiqizo, ukuhlanekezelwa kanye namanani enqatshiwe ancishisiwe.
Ukusetshenziswa Kamandla Okuncishisiwe Ukhathele ukwengeza izikweletu zomsebenzi? Le nqubo eyonga amandla ngokukhethekile iguqula kuze kufike kuma-90% wamandla asetshenzisiwe amandla abe ukushisa okusebenzisekayo; ama-batch furnaces ngokuvamile angama-45% kuphela awonga amandla. Ayikho imijikelezo yokufudumala noma yokupholisa edingekayo ngakho-ke ukulahleka kokushisa kwehliswa kube ubuncane obungenalutho.
Imvelo Umsindo Ukushiswa kukaphethiloli wendabuko akudingekile, okuholela kwinqubo ehlanzekile, engangcolisi ezosiza ukuvikela imvelo.
Kuyini ukushisa kwe-Induction?
Ukushisa Ukushisa iyindlela Yokushisisa Engathintwa Yezidumbu, emunca amandla avela ku-Alternating Magnetic Field, eyenziwe yi-Induction Coil (Inductor).
Kunezindlela ezimbili zokumunca amandla:
ukukhiqizwa kwemisinga ye-close-loop (eddy) ngaphakathi komzimba edala ukushisa ngenxa yokumelana nogesi kwezinto zomzimba
ukushisa kwe-hysteresis (okokusebenza kukazibuthe KUPHELA!) ngenxa yokushayisana kwamavolumu amakhulu kazibuthe (izizinda), ajikeleza ngokulandela ukuma kwamandla kazibuthe wangaphandle
Umgomo we-Induction Heating
Chain of izenzakalo:
Induction Ukushisa ugesi iletha i-current (I1) yamanje kwikhoyili yokungeniswa
Ikhoyili currents (ampere-Turn) ikhiqiza amandla kazibuthe. Imigqa yensimu ihlala ivaliwe (umthetho wemvelo!) Futhi umugqa ngamunye uzungeza umthombo wamanje - ukujika kwekhoyili nomsebenzi wokusebenza
Inkambu kazibuthe eshintshanayo egeleza esigabeni esinqamulelayo (kuhlanganiswe nengxenye) inciphisa amandla engxenye
Amandla we-voltage akhiqizwayo enza imisinga ye-eddy (I2) engxenyeni egeleza iye kolunye uhlangothi oluphambene nekhoyili yamanje lapho kungenzeka khona
Imisinga ye-Eddy ikhiqiza ukushisa engxenyeni
Ukugeleza kwamandla ekufakweni kokushisa kwe-Induction
Kushintshaniswa isiqondiso samanje sokushintsha kabili phakathi nomjikelezo ngamunye wemvamisa. Uma imvamisa ingu-1kHz, ushintsho lwamanje lubheka izikhathi ezingama-2000 ngomzuzwana.
Umkhiqizo wamanje nowamandla unikeza inani lamandla asheshayo (p = ixu), ahamba phakathi kokuphakelwa kwamandla nekhoyili. Singasho ukuthi amandla amuncwa kancane (Amandla Asebenzayo) futhi akhonjiswe kancane (Amandla Asebenzayo) yikhoyili. I-Capacitor battery isetshenziselwa ukukhipha i-generator emandleni asebenzayo. Ama-capacitors athola amandla asebenzayo kusuka kwekhoyili bese ewathumela emuva kuma-oscillations asekela ikhoyili.
Isekethe "ikhoyili-isiguquli-ama-capacitors" libizwa nge-Resonant noma iTank Circuit.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa, Ubuchwepheshe Amathegi ukwelashwa ukushisa, ukushisa ukwelashwa kokushisa, insizakalo yokwelapha ukushisa, ukwelashwa kokushisa, ukwelashwa kokushisa, Ukwelashwa kokushisa kwe-HF, ukwelashwa kokushisa okuvama kakhulu, ukwelashwa kokushisa okuvama kakhulu, ukukhipha ukushisa kokufakelwa, inqubo yokwelapha ukushisa kokungeniswa, ukwelashwa kokushisa okuphezulu, ukwelashwa kokushisa ngaphezulu Imeyili kwemikhumbi